Disposable agbanwe agbanwe earloop ...
A na-enye akụrụngwa nke mkpuchi ihu mkpuchi ihu na-arụ ọrụ site na ụlọ ọrụ mmepụta ọgwụ ọdịnala ọdịnala, nke na-ewepụta ihe ọgwụ maka ogologo oge, yana agwa dị mma. Ọzọkwa, ihe iru eru dị mkpa nke ihe na-agbaso ụkpụrụ nke usoro njikwa iru eru nke EN14683. Karịsịa, etiti ihe na-gbazee maka 25 gram kwa square mita na BFE (Bacterial filtration arụmọrụ) bụ 99% n'elu, nke a na-enye site na Sinopec, akpọ kasị mma gbazee fụọ m ...
Companylọ ọrụ anyị webatara ihe eji emepụta ọkachamara na teknụzụ dị elu maka ịmịpụta eriri aka. Isi akụrụngwa bụ chinlon na spandex. Anyị nwere ike ịnye ụyọkọ agba agba ọtụtụ agba. Nke a ntị loop gbalaga bụ na-acha ọcha na agba, na obosara bụ 3mm nke gburugburu. Okwesiri maka udiri ihu ogwu ma obu nke ihu aru. Ọ na-abụkarị, mkpọchi ntị maka ihe nkpuchi ihu, ike ya bụ 17 N. Anyị nwere akpa ma ọ bụ ngwugwu ngwugwu Mbupu nwere ike ime site na ikuku ikuku ngwa ngwa. Maka nke ...
Nzube na nkowa nke ihe nlele virus 1. A na-eji ya maka nchịkọta na njem nke influenza na-adakarị, avian influenza (dịka H7N9), aka-ụkwụ-ọnụ, nje na ụdị nje virus ndị ọzọ yana mycoplasma, ureaplasma na chlamydia ụdị 2. A na-echekwa nje na ihe atụ ndị yiri ya na-ebugharị n'ime awa 48 na steeti refrjiraeto (ogo 2-8). 3.Virus na ihe atụ ndị metụtara ya echekwara na ogo 80 ma ọ bụ na nitrogen mmiri ruo ogologo oge. Pụrụ Iche: A) Ọ bụrụ na kọleji ...
Anyị nwere ike ịnye ọmarịcha swiiti ahụ mara mma, yana kwa swiiti ahaziri. Anyị bụ ndị mbụ emeputa na nwere ụlọ ọrụ mmepụta ihe, àjà dị ọnụ ala mmepụta ihe price na kacha mma mma. Isi ihe nke swiiti ahụ bụ charageenan, sirop sirop, xylitol, ntụ ntụ ahaziri iche, na mgbakwunye nri ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịnye ụdị anụ ọhịa bea ahụ, a na-ahazi ụdị ụdị ndị ọzọ, ma mee ya maka ụbọchị 20. Ruo ugbu a, agba nke cherry uhie, lemon odo, apụl green, acha anụnụ anụnụ, na odo odo bụ ...